Ibanga Futhi Sorters, Agricultural Products Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample – JobDescriptionSample
Ikhaya / Ukukhangisa / Ibanga Futhi Sorters, Agricultural Products Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa Shiya amazwana 305 Ukubukwa
Freight Futhi Cargo Inspectors Job Description / Umthwalo Isifanekiso Futhi Imisebenzi
Umkhumbi Onjiniyela Job Description / Izabelo Futhi Ukuziphendulela Isifanekiso
Nuclear Medicine Physicians Job Description / Umthwalo Isifanekiso Futhi Imisebenzi
Ibanga, ezihlukahlukene, noma ukuhambisa ukudla okungukuthi wonke kanye nezinye izimpahla epulazini by sizing, amakhilogremu, umthunzi, noma ukugula.
Rank futhi uhlobo imikhiqizo ngokusho izici eziningana ezinjengolwazi isibonelo umbala, izinhlobo, obuphelele, obanzi, bheka, umqondo, iphunga, futhi yekhwalithi ukuze uqiniseke ukuthi handling ezifanele futhi ukusetshenziswa.
Phonsani imikhiqizo efanele noma noma ezinga eliphansi ndaba engavamile, futhi isikhundla izimpahla ziyamukeleka zifakwe emigqonyeni ukulawula okungukuthi ngaphezulu.
Cabanga izinto noma asihlole opondo, aesthetically noma bazizwa.
Beka izimpahla izigubhu ngokuhambisana ezingeni nasezingeni amamaki on izimbiza.
Bika i-id noma ibanga nenani amathikithi noma lokuthumela, ukuthola, noma yokuthengisa zokulala.
fibre Independent tufts phakathi kweminwe ukunquma izinga athishela ngezinto zokwakha kanye namandla.
Ukufunda imisho Ulwazi-Ulwazi nemisho ukulungele amafayela ezihlobene nomsebenzi.
Active Ukulalela-Wethule ukunakwa okugcwele noma yini abanye abathi, usebenzisa isikhathi ngawe siqonde izinto enziwa, ezibuza imibuzo njengoba efanele, futhi ungalokothi likhinyabeze ngezikhathi ezingafanelekile.
Ukukhiqiza-bexoxa kahle olotshelwe njengoba ezifanela izidingo izilaleli.
Ukukhuluma-Ukukhuluma-kwabanye ukuba idlulisele ukwaziswa kahle.
Mathematics-Isebenzisa maths ukulungisa izinkinga.
Ucwaningo-Ukusebenzisa izinqubomgomo yezokwelapha nezindlela ukulungisa izinkinga.
Criticalthinking-Lisebenzisa lokwahlulela isizathu zibheka amakhono nokushiyeka komngane okutholakele, izixazululo enye noma Tindlelanchubo nezindaba.
Active Learning-Ukuqonda imiphumela info okungukuthi fresh esizayo ngamunye futhi problemsolving ekhona futhi izinqumo.
Ukufunda Strategies-Isebenzisa bese ukhetha amasu coachingANDinstructional namasu esifanele isimo lapho usukwazi ukudlala kahle noma ukufundisa amaphuzu amasha.
Ukulandelela-MonitoringORAssessing nekusebenta ngokwakho, abantu ukuthi kukhona nezinye, noma izinkampane ukudala izinguquko noma cabanga isinyathelo sokulungisa.
Komphakathi Perceptiveness-Ngokuhlale bekhumbula othersA kuthambekela futhi ukwazi ukuthi kungani zisabela ngoba benza.
izenzo Control ezidunga maqondana nemisebenzi othersI.
Ukuthonya-Obukholisayo abanye ukushintsha amakhanda noma izenzo zabo.
Ingxoxo-Ethula abanye ndawonye nokuzama buyisana okwahlukile.
Ukuqeqeshwa-ibayala abanye howto ukuthatha isinyathelo.
Izikhungo Orientation-Nakanjani ekufuneni izindlela ezisiza abantu.
Advanced Problemsolving-Ukuhlukanisa izinkinga oluseqophelweni imininingwane efanele cabangela futhi ukukhiqiza izinqumo futhi basebenzise amakhambi.
Operations kulinganisa-Uma ucabangela okuthengiswayo izimfanelo futhi efisa isakhiwo.
Ubuchwepheshe Design-Engineering ukunikela umsebenzisi nokwenza noma ukushintsha amadivayisi izidingo.
amathuluzi kanye uhlobo imishini kwakudingeka sina ezokhipha umsebenzi Amathuluzi Ukukhethwa Ukuthola.
imishini Ukufakwa-Ukungeza, imishini, izintambo, noma izinhlelo ukwanelisa izidingo.
Ukuthuthukiswa-Kokuqamba izinhlelo zekhompyutha kwemisebenzi ukuthi kukhona ehlukahlukene.
Ukusebenza Tracking zokubuka izingcingo, Izikali, noma amasignali ezengeziwe qiniseka kukhona imishini okwamanje isebenze kahle.
Inqubo kanye ngokulawuli Ukuphathwa izinqubo amathuluzi noma izindlela.
Isondlo-Ukwenza ukunakekela amathuluzi nokubona lapho futhi hlobo luni lwe yokusevisa iyoba ezidingekayo.
Ukuxazulula-Inquma izizathu isebenze amaphutha futhi benquma nokuthi ukuqhubeka nanoma-ke.
Ukubuyisela-Ukubeka izinhlelo noma imishini sisebenzisa imishini ukuthi kubalulekile.
Quality-Control Examination-Kwenziwa nophenyo futhi ukuhlolwa imikhiqizo, abahlinzeki, noma imisebenzi ukuhlola ukusebenza kahle noma izinga.
Buka futhi izinzuzo Decisionmaking-Uma ucabangela kanye nezindleko jikelele imisebenzi kungenzeka ukukhetha omunye okulungele kakhulu.
Systems Ukuhlaziya-Ukunquma izinguquko endleleni emkhathini, amabhizinisi, futhi izimo kuzoba nomthelela izinzuzo futhi hlobo luni indlela okufanele asebenze.
izinyathelo noma izinkomba ukusebenza uhlelo Izindlela Ukuhlolwa-ezilihlukanisayo kanye olunembile noma izinyathelo ezidingekayo ukuze uthuthukise ukusebenza kahle, ngokuhambisana nezinhloso zedivayisi.
Isikhathi-Management-Ukusingatha lesi senzakalo yabanye kanye inkathi oneis siqu.
Ukusebenza kwezinhlaka lwezezimali Resources-Ukunquma indlela engenayo uya ingasetshenziswa ukuthola yomsebenzi, futhi ukugcinwa mayelana lezi zindleko.
Ukugada Izinto Resources-Ukubukela nokwamukela ekusetshenzisweni efanelekayo izikhungo, amathuluzi, futhi izinto waba isidingo sokwenza umsebenzi othile.
Ukugada Yezisebenzi Resources-Idala ekhuthazayo, futhi eqondisa abantu ngoba babesebenza, ekuboneni abantu ngempumelelo kakhulu ukuthi umsebenzi.
Ngaphansi-ngaphandle eziphezulu School Diploma
Senior Diploma Isikolo samabanga aphezulu (noma kukaGedaliya noma Senior School kwefrakshini Ukufaneleka)
Faculty Amakilasi Abaningi
Umsebenzi Control Skills Udinga
ukuphikelela – 81.08%
Ukuphathwa – 75.40%
Usizo – 82.78%
Inkinga Abanye – 82.64%
Ukuhambisana Komphakathi – 84.27%
Ukuzithiba – 84.64%
ingcindezi Tolerance – 80.58%
Ukuthembeka – 94.96%
Gxila Yokuxhumana – 87.92%
ubuqotho – 89.27%
Ukuzibusa – 87.74%
Ukuqamba – 79.68%
Analytical Ukucabanga – 86.09%
Tour Guides Futhi Escorts Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample
Carry ngabanye noma izinhlangano kuhlanganise izinkampani professional, izakhiwo zomphakathi, nemipheme noma ngokusebenzisa izindawo izivakashi, …